Ungaqala Kanjani Ibhizinisi Lehlahlayo | Martech Zone
Ungaqala Kanjani Ibhizinisi Lokwehla
ULwesihlanu, May 21, 2021 ULwesihlanu, May 21, 2021 Douglas Karr
Le minyaka embalwa edlule ibijabulisa kakhulu osomabhizinisi noma izinkampani ezifuna ukwakha ibhizinisi le-ecommerce. Eminyakeni eyishumi eyedlule, ukwethula ipulatifomu ye-ecommerce, ukuhlanganisa ukucubungula kwakho ukukhokha, ukubala amanani entela asekhaya, ombuso, nezwe lonke, ukwakha ukuzenzakalela kokumaketha, ukuhlanganisa umhlinzeki wemikhumbi, nokuletha ipulatifomu yakho yezimpahla ukuhambisa umkhiqizo usuka ekuthengisweni uye ekulethweni kwathatha izinyanga namakhulu ezinkulungwane zamarandi.
Manje, sethula isiza kungxenyekazi ye-ecommerce efana Thenga or I-BigCommerce kungenziwa ngamahora kunezinyanga. Iningi linezinketho zokucubungula izinkokhelo ezakhelwe ngaphakathi. Futhi amapulatifomu ezentengiselwano zesimanje anjenge Klaviyo, I-Omnisend, noma I-Moosend umshudo uqhubeke ngaphandle kwanoma yini ngaphandle kokuchofoza inkinobho.
IDropshipping imodeli yebhizinisi lapho wena, umthengisi, akudingeki ugcine noma uphathe noma yisiphi isitoko. Amakhasimende a-oda imikhiqizo ngesitolo sakho esiku-inthanethi, bese wazisa umphakeli wakho Benza inqubo, bapakishe, bese bathumela umkhiqizo ngqo kukhasimende.
Imakethe eyehlayo emhlabeni wonke iya cishe ku- $ 150 billion kulo nyaka futhi kufanele iphindwe kathathu kungakapheli iminyaka emihlanu. Ama-5% wabathengisi bewebhu bashintshele ukulahla umkhumbi njengendlela yabo eyinhloko yokugcwaliseka kwe-oda. Ukungasho ukuthi ukuthengiswa kwe-Amazon okungama-27% kwagcwaliseka kusetshenziswa i-dropshipper kule minyaka eyishumi edlule!
Ngamapulatifomu wokwehla afana Kuyaphrinta, isibonelo, ungaqala ukuklama nokuthengisa imikhiqizo ngokushesha. Akunasidingo sokuphatha isitoko, noma ukhathazeke ngokukhiqizwa… ibhizinisi lakho lokudonsa kumane kungukuthi uphatha, uthuthukisa, futhi uphromothe imikhiqizo yakho online ngaphandle kobunye ubunzima.
Isazi seWebhusayithi Sethule umhlahlandlela omusha we-infographic, Ungaqala Kanjani Ibhizinisi Lokwehla. Umhlahlandlela we-infographic usebenzisa izibalo zakamuva kanye nocwaningo olususelwa kumininingwane evela kochwepheshe beDropshipping esikhulume nabo. Nakhu okuhlanganayo:
Yini Ukwehliswa Kuyini nokuthi Kusebenza Kanjani
Izibalo Zamuva Zomthelela Wazo
Izinyathelo ezi-5 zokuqala ibhizinisi leDropshipping
3 Amaphutha ajwayelekile weDropshipping Ukuwagwema
Ukuqamba Izinganekwane Ezijwayelekile Zokwehla
I-Main Pros and Cons of Dropshipping
Kuphela Ngokucela: Ingabe Kufanele Uwele Phansi?
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo zamapulatifomu ashiwo kule ndatshana.
Tags: ukwehlaukwehla kwe-infographicizibalo zokwehlainfographiciwebhsayithi
I-PhoneWagon: Konke Okudingayo Ukuze Usebenzise Ukulandelwa Kwezingcingo Ngezibalo Zakho
Izizathu Ezi-9 Zokuthi Ukutshala Imali Kwisoftware Yokumaketha Kokudluliselwa Kuyindlela Yokutshala Imali Engcono Kakhulu Ekukhuleni Kwebhizinisi Lakho